Nivadika revolisiona sy fiafenana an-tsisintany ny orinasa makiazin’ ilay mpanakanto mpanao makiazy LGBTQ any Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Tsy nety nikarakara ireo mpanjifa manankarena manohana ny fitondrana miaramila i May Oo
Voadika ny 06 Oktobra 2021 3:35 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, 日本語, Español, Français, русский, English
May Oo, artista pelaka malaza mpanao makiazy, nandritra ny fihetsiketseha-panoherana ny fitondrana tao Yangon tamin'ny volana febroary 2021. Sary sy fanazavana avy amin'ny The Irrawaddy, nahazoana alalana.
Navoaka voalohany tao amin'ny The Irrawaddy, tranokalam-baovao tsy miankina iray any Myanmar ity lahatsoratra ity. Naverina navoaka tato amin'ny Global Voices ny endrika nasiam-panovana ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Hatramin'ny fakàna fahefana an-keriny nataon'ny miaramila tamin'ny 1 febroary, ny endrika lamaody, fanatsarana tarehy no lafiny manan-danja indrindra tamin'ny fiainan'i May Oo isan'andro.
Nandritra ny folo taona mahery, nampiasa ny fahaizany sy ny fitiavany hanova ny endriky ny olona hitamaso izy, ​​hetsika iray izay nahatonga azy ho iray amin'ireo mpanakanto makiazy be mpitady be indrindra any Yangon. Anisan'ny mpanjifan'i May Oo ireo olo-malaza sy fianakavin'ireo manamboninahitra ambony.
“Asa tena tiako io ary hitako ho zavakanto famoronan-java-baovao”, hoy i May Oo, pelaka.
Saingy nampitsimbadika ny fiainany ho ambony ambany ny fakàna fitondrana an-keriny nataon'ny miaramila izay nanongana ny governemanta voafidy notarihin'i Daw Aung San Suu Kyi avy ao amin'ny Ligy Nasionaly ho an'ny Demaokrasia (NLD).
Nanohitra ny fanonganam-panjakana ity pelaka 33 taona ity amin'ny maha mpanohana ny governemanta NLD azy.
Tsy azonay ekena izany. Nangalatra fahefana tamin'ny governemanta sivily voafidy izay nofidianay ny miaramila.
Tahaka ireo sasany an-tapitrisany, nanatevin-daharana ny fanentanana manohitra ny fanonganam-panjakana nipoitra nanerana ny firenena izy, izay nanomboka tamin'ny kapokapoka lapoaly sy vilany amin'ny alina ka hatramin'ny fihetsiketsehana an-dalambe isan'andro miantso ireo mpiasam-panjakana hanao fitokonana. Mandritra izany fotoana izany, nanaparitaka vaovao momba ny hetsi-panoherana ny fitondrana fantatra amin'ny anarana hoe Revolisiona Lohataona Myanmar izy tamin'ny alàlan'ny pejiny media sosialy manokana izay misy mpanjohy 770.000, manaitra ny mpanjifany amin'ireo sariny miaraka amin'ny megafônina miantsoantso ireo teny filamatra fanoherana ny fitondrana eo alohan'ny laharan'ny fihetsiketsehana.
Tamin'ny volana marsa, tsy nety nanome tolotra makiazy ho an'ireo fianakaviana manankarena nikasa hanatrika ny lanonana ara-pinoana nokarakarain'ny fitondrana miaramila tany Naypyitaw, izay nanoloran'ny fitondrana miaramila ny anaram-boninahitra ho an'ireo olona manankarena izy.
Saingy nizaka mafy ny vokatry ny fikatrohany izy nony farany.
Namoaka didy fampisamborana azy ny fitondrana, noho ny fikomiana. Niditra an-keriny tao an-tranony ny miaramila ary naka ny zava-drehetra, anisan'izany ny solosainany sy boaty fanaovana makiazy. “Nopotehin'izy ireo ihany koa ny zavatra rehetra tao amin'ny efitrano iray manontolo,” hoy i May Oo. Soa ihany fa nahavita nandositra ny fisamborana azy izy.
Rehefa nihamafy ny famoretana nataon'ny fitondrana miaramila tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny faran'ny volana marsa lasa teo, dia voatery niafina i May Oo tamin'ny volana Avrily noho ny fandraisany anjara tamin'ny fihetsiketsehana sy nanampy ireo niharan'ny famoretana sy ny fianakavian'izy ireo.
Tamin'ny 2 septambra lasa teo, namono sivily 1.043 ny fitondrana miaramila ary mitotaly 7.768 ireo voasambotra ka mbola voatazona ny 6132. Ankoatra izay, nandroba sy nanimba fananana nandritra ny fanafihana nataony ny fitondrana miaramila.
Nandritra ny fihibohana onja voalohany sy faharoa noho ny COVID-19 tamin'ny taona 2020, afaka nanohy ny asany i May Oo, anisan'izany ny fanomezana fiofanana ho an'ireo mpanakanto mpankafy. Nampiofana mpankafy makiazy sy tanora mana-talenta tamin'ny asany izy hatramin'ny taona 2017, rehefa nanokatra ny sekoly May Oo Magic Beauty, sy nitarika ekipa mpanao makiazy. Nampiasa olona 12 miasa tontolo andro sy mpanakanto 60 miasa tapak'andro izy talohan'ny fanonganam-panjakana.
Nidina an-dalambe i May Oo mba hanatevin-daharana ny hetsi-panoherana ny fitondrana, mitaky ny famerenana ny demaokrasia sy ny famoahana ilay sivily mpanolotsaim-panjakana nogadraina Daw Aung San Suu Kyi tao Yangon tamin'ny Febroary 2021. Sary sy fanazavana avy amin'ny Irrawaddy, nahazoana alalana.
Miaina fiainana tena hafa any amin'ny faritra sisintany i May Oo ankehitriny ary mahatsiaro voaaro. (Tsy nety nanome antsipiriany noho ny antony fiarovana azy izy). Efa nahazo fiofanana momba ny fampiasàna fitaovam-piadiana, tahaka ireo tanora hafa vonona hanongana ny fitondrana miaramila amin'ny alalan'ny fanoherana mampiasa fitaovam-piadiana izy, saingy nahita izy fa tsy nety tamin'ny tanany efa zatra mampiasa borosy fanaovana makiazy ny fampiasana basy. Nanomboka teo dia nanokana ny fotoanany sy ny heriny tamin'ny hetsika hafa, toy ny fanangonam-bola ho an'ny hetsika i May Oo.
Fantatro fa tsy [amin'ny hetsika miaramila] ny heriko, ka misafidy ny hanohana ity revolisiona ity amin'ny fomba rehetra azoko atao aho. Hitako ho toy ny andry fotsiny ny tenako mba hanampy ny revolisiona ho mpandresy.
Niaiky i May Oo fa tsy nahatàna ka nankasitraka ireo zatovovavy hitany tena vonona amin'ny fiofanana ara-tafika, ary nampiany fa nahatonga azy nanana fahatsapana mifangaro ny fahitana azy ireo.
Azoko antoka fa tsy nieritreritra mihitsy izy ireo fa hizotra amin'ny fiainana sarotra tahaka izao. Saingy hitan'izy ireo fa tsy misy zavatra manan-danja kokoa ankoatra ny fandroahana ny fitondrana. Noho izany, mahatsiaro ho voaaro amin'ny fahantrana sy ny zava-tsarotra rehetra izy ireo. Malahelo azy ireo aho saingy koa mahatsiaro faly [ho an'ny firenena].
Amin'ny maha-lehilahy pelaka azy misokatra amin'ny fironany ara-pananahana, tsotra ny fanantenany tamin'ny nifidy an'ny NLD tamin'ny fifidianana Novambra 2020: naniry governemanta manaja ny zon'olombelona izy, ka ​​anisan'izany ireo vondron'olona LGBTQ, izay efa ela no niatrika fanavakavahana tany Myanmar .
Nilaza tamin'ny Irrawaddy izy fa raha ny fomba fijeriny, nihena ny fanararaotana ara-batana sy am-bava mihatra amin'ny vahoaka LGBTQ teo ambany fitondram-panjakana sivily.
Noharatsiana noho ny fironana ara-nofonay izahay nandritra ny fotoana ela, saingy taorian'ny taona 2015, nahatsiaro ho tsy dia niharan'ny fanavakavahana izahay, ary nisy ny hirika nomena ho an'ireo mpanakanto mpanao makiazy hisafidy ny lalana tian'izy ireo.
Iharan'ny fanenjehana sy fanavakavahana ofisialy eo ambany fizarana 377 amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana ary koa ny Lalàna mifehy ny Polisy ny vahoaka LGBTQ. Azo saziana hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina ny olona miditra amin'ny firaisana mitovy fananahana. Nanomboka teo ambany fanjakana NLD ny fanosehana ny fanovana lalàna, ary nanana fanantenana lehibe tamin'izany ny vondrom-piarahamonina LGBTQ.
Nijaly ny fanavakavahana aminy maha olona pelaka ahy hatramin'ny fahatanorako aho. Tsy te-hiaina izany intsony aho.
Efa ho dimy volana izao i May Oo no niafina. Nilaza izy indraindray fa mahatsiaro malahelo, indrindra rehefa mahita olona manana fahafinaretana ao amin'ny Facebook.
Tsy maharitra ela anefa izany fahatsapana izany, satria mampionona ny tenako amin'ny fahalalana aho fa tsy nanao ratsy ary nijoro tamin'ny lala-marina.
Rehefa nanontaniana izy raha malahelo ny fiainany taloha amin'ny maha mpanakanto makiazy azy, dia nilaza izy hoe sady eny no tsia. Malahelo izy rehefa mieritreritra ny fiainany taloha.
Saingy rehefa mieritreritra ny ampitso eo ambanin'ity toe-java-misy ankehitriny ity aho, dia tsy malahelo izany mihitsy, satria tsy azonao vinavinaina izay hitranga manaraka. Mampientanentana [ny mahita] izay homen'ny hoaviko ho ahy.